साउन १३, २०७४ शुक्रवार २१:०२:५८ प्रकाशित
करिब अढाई वर्ष अछामबासीको सेवा गरेर साउन ८ गते डा. शरदचन्द्र बराल जिल्लाबाट बिदा हुनुभयो । वीर अस्पतालमा इन्टरनल मेडिसिन विषयमा एमडी गर्न तीन वर्षका लागि उहाँ अध्ययन विदामा जानुभएको हो। यो संस्मरण लेखिरहँदा म बिदाइ समारोहको भावुक क्षण सम्झिरहेको छु। जहाँ अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सबै कर्मचारीका आँखाका चेपहरु रसाइरहेका थिए।
वास्तवमा कुनै कर्मचारीको बिदाइ हुँदा सम्बन्धित कार्यालयका साथीसंगाती दुःखी हुनु स्वभाविक कुरा पनि हो। त्यसमाथि सबै कर्मचारीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न सफल मानिस बिदा हुँदा एकप्रकारको शून्यता नै छाउँछ। कार्यालयका हरेक कर्मचारीसँग बिदाइ भई जाने कर्मचारीको भावना जोडिएको हुन्छ, स्मृति गाँसिएको हुन्छ, अनि बनेको हुन्छ एकप्रकारको अटुट सम्बन्ध।
तर, डा. बरालको बिदाइमा हामी सबैले अतिरिक्त दुःखको महसुस गर्यौं। त्यो उहाँले वर्षौंका लागि सम्झनलायक कामहरु गरेकाले, यहाँको माटोमा आफ्नो विशिष्ट पदचाप छाडेर गएकाले अनि समग्र जिल्लालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय मानचित्रमा अगाडि ल्याइदिनुभएकाले हो।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख डा. बरालले कसरी नेतृत्व क्षमताको बलमा छोटो समयमै अछाम अस्पताललाई भरोसाको केन्द्र बनाउनुभयो? कसरी जिल्ला अस्पताल मात्र होइन, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पनि देशभरमै उत्कृष्ट सावित भयो भन्ने कथा साँच्चै नै प्रेरणादायी छ।
व्यक्तिगत रुपमा मैले करिब दुईवर्ष अछाम जिल्ला अस्पतालमा उहाँसँगै रहेर काम गर्ने मौका पाएँ। यो अवधिमा उहाँबाट थुप्रै कुराहरु सिक्न सकेँ। क्लिनिकल कुराहरु त भइहाले, सँगसँगै दुर्गमको स्वास्थ्य प्रणालीका व्यवस्थापकीय पाटोसम्बन्धि अमूल्य पाठहरु सिकाएर जानुभएको छ उहाँ।
डा. बरालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश थियो, ‘भद्रगोल सिस्टममा कम्प्लेन गरिरहन र समस्या देखाइरहन सजिलो छ, त्यो जसले पनि गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो काम यो भएन र त्यो भएन भन्ने होइन, आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सकारात्मक सोचाइ राखेर समाधान खोज्ने हो।’
यो सोचाइ उहाँको व्यवहारमा ठ्याक्कै प्रतिविम्बित हुन्थ्यो। उहाँले काम गर्ने दौरान कति बाधा-व्यवधानहरु आए, तर कहिल्यै पनि उहाँले हार मान्नु भएन। ह्या, यो सिस्टममा रहेर काम गर्ने वातवरण नै छैन भनेर बहानाबाजी गर्नुभएन। बरु नयाँनयाँ रचनात्मक उपायहरु फुराउँदै जानुभयो। हामीलाई सधैं भन्नुहुन्थ्यो, 'हामी पनि भागेर गयौं भने यो देशमा गर्ने कसले?' त्योबेला मलाई सधैं लाग्थ्यो- देशको भविष्य हामीजस्तै युवापुस्ताको हातमा छ; गर्ने हामीले नै हो। गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण डा. बराल हाम्रैअगाडि हुनुहुन्थ्यो।
सामान्यत: सरकारी अस्पताल भन्नेबित्तिकै हाम्रो मानसमा एक किसिमको नकारात्मक छाप पर्ने गर्छ। फोहोर, दुर्गन्ध, घन्टौंको लाइन, डाक्टर नभेटिनु, औषधि नपाइनु- झट्ट सम्झिँदा आममानिसको मनमा आउने चित्र यस्तै हुन्छ। तर डा. बरालले अछाम जिल्ला अस्पतालको नेतृत्व सम्हालेयता आममानिसले सोच्ने यो चित्रमा बदलाव आयो। स्थानीयहरुले सरकारी निकायमा पनि काम हुँदो रहेछ, गुणस्तरीय सेवा पाइँदो रहेछ भनी विश्वास गर्न थाले।
म स्वयंलाई यहाँ आउनुअघि लागेको थियो, ‘दुर्गमको सरकारी अस्पताल भनेपछि के नै गतिलो होला र? दिउँसो बिरामी हेर्ने अनि साँझबिहान पिपी (प्राइभेट प्राक्टिस) गर्ने। यसरी नै एक वर्ष कटाउने अनि घरपायक मिलाएर सरुवा गर्ने।’ तर यहाँ आएको एक महिनामै डा. बरालको सोच र काम गराइ देखेर मैले आफ्नो सोच र योजना बदलेँ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई जनताले विश्वास गर्नलायकको भरोसायोग्य ठाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने डा. बरालको सोचले मलाई प्रभावित गर्यो र मैले पनि उहाँकै पाइला पछ्याउँदै आफ्नो पूरै समय जिल्ला अस्पताललाई समर्पित गरेँ।
पक्कै पनि अछामले पाएको सफलताको हकदार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको पूरै टीम हो। एकजना व्यक्तिको एकल प्रयासले मात्र त यो सम्भव हुने कुरा होइन। तर नेतृत्वमा को छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्ने रहेछ। काम गरेर देखाउने 'स्पिरिट' भएको जुझारु टिम हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वमा रहेको ‘म्यानेजर’ गतिलो भएन भने त्यो जुझारु टिमको परिचालन राम्रोसँग हुन सक्दैन। समन्यव सही ढंगले हुन सक्दैन अनि राम्रो परिणाम हात लाग्दैन।
इमान्दारिता, नेतृत्वक्षमता र काम गर्ने भिजन- यी तीन कुराको त्रिवेणी हुनुहुन्छ डा. बराल। बिहान सबेरै कोठाबाट निस्केपछि दिनभरि अस्पतालकै काममा खटिने र राति अबेर मात्रै कोठा फर्कने उहाँको खट्न सक्ने क्षमता देखेर म चकित भएको थिएँ। आर्थिक मामिलामा पनि उहाँ यति पारदर्शी र ‘क्लिन’ निस्किनुभयो कि कसैले उहाँलाई औंला उठाउन सकेन।
समन्वयात्मक ढंगले काम गर्ने शैली र सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिको भावनाका कारण नै डा. बराल अस्पताल व्यवस्थापनको कुनै औपचारिक शिक्षाबिना पनि यस क्षेत्रमा अब्बल सावित हुनुभयो।
तर, हामीकहाँ एकजना गतिलो म्यानेजर आइपुग्दा संस्थाले कुनै एक बिन्दुमा फड्को मार्ने अनि केही समयपछि ऊ अन्तै जाँदा संस्था पुरानै हालतमा फर्केका उदाहरण पनि छन्। एउटा कुशल म्यानेजरको विशेषता भने के पनि हो भने उसले आफ्नो कार्यकालमा एउटा यस्तो प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ जसअनुसार उसको पदमा जोसुकै व्यक्ति आओस् त्यसले संस्थाको काम गराइमा कुनै फरक नपारोस्।
डा. बरालले यो अढाई वर्षमा त्यस्तो प्रणालीको विकास गर्न सक्नुभयो या भएन, त्यो आगामी दिनमा अछामको ‘पर्फर्मेन्स’ ले बताउने नै छ। अहिलेलाई भने हामीले उहाँलाई यति आश्वास्त पार्न चाहन्छौं कि, 'तपाईंले छोडेर जानुभएको विरासतलाई हामीले पक्कै पनि अझ उन्नत ढंगले अघि बढाउने नै छौं।'
आशा छ, डा. बराल एमडीको अध्ययनपछि पनि विशेषज्ञ सेवा दिन यस्तै दूरदराजका ठाउँ आउनुहुनेछ, विकटका बिरामीको सेवामा समर्पित हुनुहुनेछ र मजस्तै युवापुस्ताका भाइहरुलाई प्रेरणा र हौसला दिँदै थप डा. बरालहरु जन्माइरहनुहुनेछ।
(डा. लामिछाने जिल्ला अस्पताल अछामका मेडिकल अधिकृत हुन्)